Semalt: Aiza no ahitana ny valiny amin'ny wiki?
«Sams mampianatra ny tenanao amin'ny Wikipedia ao anatin'ny 10 minitra» dia boky malaza nosoratan'i Michael Miller. Manome valiny tsotra sy mahasoa amin'ny fanontaniantsika momba Wikipedia izany, ary mianatra ny fomba fampiasana rakipahalalana ao anatin'ny folo minitra. Afaka mianatra ny zavatra rehetra ilaintsika ny mahafantatra momba ny Wikipedia ary mahazo ny fidirana amin'ireo loharano mahagaga sy malaza. Hatreto, Michael Miller dia nanoratra boky tsy an-jatony sivika sy tsipiriany, ary anaram-boninahitra malaza hoe «Sams Teach Yourself YouTube anatin'ny 10 minitra», «Googlepedia: Resource Google Ultimate,» «Vitao ity! Tari-dalana momba ny teknika tsy manara-penitra mba hanatsarana ny ordinatera tsy mahazatra, ary ny torolalana tsy misy dikany amin'ny Computer Informatika ». Nahazo laza tsara eran-tany io mpanoratra io noho ny fahamarinany ara-teknika, ny fiaraha-miory marina, ary ny torohevitra mahasoa. Nanatanteraka ny zavatra takian'ny mpamaky rehetra izy.
Ahoana ny fampiasana Wikipedia?
Lisa Mitchell, Semalt Mpitarika Success Manager, dia mamaritra ny Wikipedia ho toy ny iray amin'ireo loharanom-baovao tsara indrindra ao amin'ny aterineto izay ahafahan'ny mpampiasa mandray sy manitsy ny votoatiny. Mba hikolokolo ny fomba fiasa ara-teknolojika mitaky, dia tokony hampiasa ny Wikipedia ho toy ny tranonkala fanavaozana sy tsara indrindra amin'ny aterineto. Mora sy tsotra ny mianjera ao amin'ny tranokala wiki raha mikaroka ny Wikipedia. Azonao atao ny mikaroka ireo mpilalao sarimihetsika izay nanao ny anjara asa tsara indrindra tao amin'ny horonan-tsary Hollywood, ary nanomboka nanadihady momba ny vadin'izy ireo ianao ary nahita fa tsy nandeha tany amin'ny sekoly ambaratonga faharoa izy ireo ary nanomboka vao maraina be. Nankalaza ny faha-15 taonany ny Wikipedia, ary ny tranonkala dia manomboka manome fampahalalana ho an'ny ankizy manao ny andraikiny sy ny devoara..Amin'ny fampiasana angon-drakitra sy fampahalalana ao amin'ny rantsana, Wikipedia no loharanom-baovao lehibe indrindra amin'ny aterineto. Ny mpanorina azy, Ward Cunningham, dia mamaritra ny famoronana ho toy ny daty marina sy tsotra indrindra izay mahafeno ny andrasan'ny olona samihafa.
Ao amin'ny bokiny, i Michael dia mampianatra ny fomba hampidirana Wikipedia ao amin'ny efitrano fianarana amin'ny ambaratonga samihafa. Amin'ny fanomezana ny mpianatra hifehy ny tetikasany, azontsika atao ny mamporisika azy ireo hanamarina ny Wikipedia ho fampahalalana mahasoa.
Ny pejy voalohany ho an'ny Wikipedia ho an'ny mpampianatra
1. Wikiispaces: Ity fizarana ity dia natao hampiasaina amin'ny efitrano fianarana. Ny Wikispaces dia pejy goavana izay miasa tsara toy ny fitaovana fitarihana any am-pianarana ary manampy ireo mpampianatra sy mpianatra hianatra ny fomba handaminana ny asany sy ny tetikasa amin'ny fomba tsara kokoa. Tsy vitan'ny hoe manome fanazavana sy fandaharana maro izy io, fa koa afaka maimaim-poana izany. Ny mpampianatra dia afaka mampiasa ity pejy ity mba hamoronana andraikitra ary afaka mizara ny loharanom-pitaovana.
2. Wikidot: Amin'ny ambaratonga fototra, ny pejy Wikipedia dia maimaim-poana ho an'ireo mpampiasa, fa ny sasany amin'ireo endriny sy ny votoaty dia aloa. Raha tsy te-hahita ny dokam-barotra sy ny sora-baventy ianao, dia tokony hividy ny sandan'ny famandrihana
3. PBworks: Misy pejy miisa maherin'ny 200,000, ity pejy Wikipedia ity dia manolotra safidy maro amin'ny mpampianatra sy mpianatra izay mamporisika ny fianarana mifototra amin'ny mpianatra. Ankoatra izany, ny mpampianatra sy ny mpianatra dia afaka mamorona mora foana ny tranokalany manokana ary afaka mamorona tetikasa an-tserasera rehefa mandeha ny fampahalalana eto amin'ity pejy ity.
Amin'ny fampidirana ireo toro-hevitra, toro-hevitra ary hevitra avy amin'ny bokin'i Michael, azonao atao ny mametraka mora ny Wikipedia ary mitazona ny tenanao amin'ny Internet Source .